ग्रेसको दुई दिने ‘टीभीएस सर्भिस फ्रि’ क्याम्प – sunpani.com
ग्रेसको दुई दिने ‘टीभीएस सर्भिस फ्रि’ क्याम्प
सुनपानी । १० माघ २०७७, शनिबार मा प्रकाशित
नेपालगञ्ज – तपाईसँग टीभीएस कम्पनीको मोटरसाइकल छ ? यदि छ र सर्भिस गर्ने बेला भएको छ भने कारकादोमा रहेको ग्रेस एण्ड ग्लोबल ट्रेनिङ प्रालिमा सम्पर्क गरिहाल्नुस् है । ग्रेसले टीभीएस कम्पनीका मोटरसाइकलका लागि नयाँ क्याम्प सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
माघको ११ र १२ गते ‘टीभीएस सर्भिस फ्रि’ क्याम्प सञ्चालन गरेको ग्रेसले विभिन्न छुटको योजना अगाडि सारेको छ । ग्रेसका सञ्चालक विशाल श्रेष्ठका अनुसार, टीभीएस फ्रि सर्भिस क्याम्पमा लेबर चार्ज निशुल्क गरिएको छ । मोविल र पार्टसमा दश प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।
ग्रेस एण्ड ग्लोबल ट्रेनिङ प्रालिले यसअघि विभिन्न स्कीमहरु सञ्चालन गरेको थियो । एक्सचेन्जलगायतका स्कीमहरु सकिएलगत्तै ग्रेसले फ्रि सर्भिस क्याम्प सञ्चालन गर्दैछ । ग्रेसका सल्लाहकार महादेवसिंह ठकुरीले फ्रि सर्भिस क्याम्पमा टीभीएसका मोटरसाइकल जहाँबाट किनेको भएपनि सर्भिस हुने जानकारी दिनुभयो ।
कारकादोचोक नजिक रहेको ग्रेसमा समयमै आएर निशुल्क आफ्नो मोटरसाइकल सर्भिस गर्न कम्पनीका सञ्चालकहरुले आग्रह गरेका छन् ।
मुक्तिपुरमा दिउँसै लाखौंको चोरी
कहिले बस्न पाउलान् खुल्ला कारागारमा कैदी ?
हिंसाको चरम रुप, श्रीमानको हत्या
दुई जनालाई कोरोना
महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई सम्मान
सुख्खा बन्दरगाह : एघार महिनामा २० प्रतिशत काम
एक जनालाई कोरोना देखिएदा एक जना नै निको
बाँकेमा ५३ प्रतिशतले पहिलो र ३६ प्रतिशतले दोस्रो डोज खोप लगाए